पत्थर पनि त
मन विनाको मान्छे रहेछ,
कोही आउँछ कि …
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, December 29, 20112: Comments
कुन हो ठाउँ ?
तस्बिरमा देखिएको ठाउँ कहाँको हो ? राम्ररी नियाल्नुस् त ! विदेश हो कि स्वदेश ? पैल्याउन सक्नुभएन भने जानकारी र यससम्बन्धी थप तस्बिर हेर्न भित्र आउनुस् >>
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, December 17, 20113: Comments
Sketch by Suraj Shakya (http://surajshakya.com)
भनिन्छ - पुरानोलाई राम्रो भनेर त्यसैमा अल्झेर बस्यो भने नयाँ कुराले ठाउँ बनाउने कुनै सम्भावना हुँदैन । कुनै वस्तु होस् कि व्यक्ति, हरेकमा लागू हुन्छ यो कुरो । पुरानोको राजले नयाँले परिचयको मञ्च नपाउने कुरा केही हदसम्म सत्य पनि हो । तर नयाँलाई स्थान दिने नाममा छेक न छन्दको पाइलालाई स्वागत गर्न सकिन्न । नयाँ प्रतिभा सम्भावनायुक्त भएर आएन भने पुरानोको विकल्प कदापि हुँदैन ।
नेपाली सुगम संगीतको क्षेत्रमा नारायण गोपाल त्यस्तै मुहान हुन् । जुन मुहानबाट अरु-अरु शाखा फैलिंदै त्यसले छुट्टै भंगालोको रूप लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो केही देखिएको छैन अहिलेसम्म । नारायणसँग दैवले नै थमाएको गला त छँदै थियो, त्यो गलामार्फत पस्किने व्यञ्जन तयार पार्न भने उनको आफ्नै मिहिनेत रहने गर्थ्यो । साथी मण्डलीको सिर्जनशील जमात छँदै थियो, आफ्नो कामलाई झारा टार्ने हिसाबले त्यो जमातमा उनले आफन्तवादको भाव घुसाएनन् कहिल्यै । गीत चयनमा अडिग रहँदै बरु आफ्नो गीतकार साथीलाई झन् खार्न लगाए, कति साथीलाई 'यस्तो त भएन' भन्दै जिल्याए । अनि कतिपयको गीत चाहिं केही जानकारी नै नदिई एकैचोटि धुन भरेर सुनाउँदा तिनलाई आकस्मिक लाभको खुसी पनि दिए ।
केही वर्षअघिसम्म रामकृष्ण ढकाल नामका युवा खुब चम्किए, नारायण गोपालकै गीतको बाटो समातेको भन्दै नारायणका प्रेमीहरुले समेत उनको सराहना गरे । आशपूर्ण नजर छाडे एक नवयुवकतिर । त्यो आशलाई स्याहार्दै केही समय विरासत पनि थामेकै हुन् ढकालले । 'यात्रा रहेछ जिन्दगी' बाट उनी अघि बढे, 'ओराली लागेको हरिणको चाल' बाट अझै उकालो लागे चर्चाको । तर उनले सायद आफू र आफ्नो क्षमता चिन्नै सकेनन्, अन्तत: बाटो बिराए । आफू केका लागि हो भन्ने नबुझेपछि परिणाम प्रतिकूल आउनु स्वाभाविक हो । पछिल्लो समयमा रामकृष्ण ढकाल स्रोताबाट छेउ लाग्दै गएको देखिंदैछ ।
गायन क्षेत्रमा एक तहको जग बसाएपछि अब सुगम संगीतमा मेरै वर्चस्व ठाने होलान् उनले, स्रोतालाई तुच्छ सम्झेर मनमौजी गर्न थाले । बुझ्न सकेनन् काँध थाप्ने स्रोताले काँधबाट थेचार्छन् पनि । रातारात सुपरहिट भएका कलाकार बिहानको झुल्के घाम देखिँदासम्म गुमनाम भएको उदाहरण धेरै छ । ढकालले सबै कुरा बिर्सेर अहंकार देखाए, आफूलाई भर्सटायल गायक सावित गर्न होला पप गीत पनि गाए, आफ्नो पहिचान भुलेर ओजपूर्ण गीत चयनमा आँखा चिम्लिन थाले । यसले एउटा नयाँ सम्भावना टुसाउँदा टुसाउँदै भाँचियो । यस्तै अहङ्कारको बुई चढ्दै गरेका शिव परियार पनि देखा पर्दैछन् । मानवीय स्वभावको तुच्छतम पतनचक्र हो : संघर्ष - प्रगति - उत्पात सफलता - अहङ्कार - असफलता !
जे होस्, धन्य हो - कुनै नयाँ चुनौतीले ढोका नढकढक्याएकैले हाम्रा स्वर सम्राटलाई हामीले पहिलेकै सघन भावमा हामीसँगै गुन्जिरहेको पाएका छौं ।
स्वर सम्राट नारायण गोपालको २१ औं स्मृति दिवसमा हार्दिक श्रद्धा सुमन !
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, December 05, 20116: Comments
Labels: व्यक्तित्व, समय-सन्दर्भ, स्मरण
जति छन् -
घुर्की, जलन, गुनासो
छि र लि ने छन्
मिल्छ भने हुर्काउनू -
नाबालक सपनाहरू पर्खिरहेछन्
तिम्रो आँखाको गुँड ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, October 20, 20112: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, October 10, 20114: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, October 02, 20112: Comments
दसैं आयो है !
लालाबालाको लागि त आउँछ दसैं
तालिममा बारम्बार औंला उठाएर सतर्क गराए जस्तो ए है, दसैं त आयो भनेर आफैंलाई याद गराउनुपर्ने भएको छ । होशचेत गुम भए झैं चाडबाडको पत्तो नै छैन । होश नभएपछि यसको अनुभूति नहुनु स्वाभाविकै हो । दसैंको रमझमलाई स्वर्गै ठानेर मक्खिने बालापन अब रहेन, यसैले उमेरकै पनि दोष होला । कि त चाडबाड मनाउने चलन नै फेरिएकोले दसैंको अनुभूति हुन छाडेको हो ! वरिपरि हेर्‍यो, कुनै रौनक पनि देखिन्न ।
हुनत, 'सहरको दसैं' सानो हुन्छ, दसैं मान्ने खास जमात गाउँतिर उर्लिएपछि दसैं उतै बढी फक्रिन्छ । गाउँलेहरूकै ओइरोले त सहरलाई 'सहर' बनाएको हो । काठमाडौंको दसैं कहिल्यै पनि खुलेको देखेको छैन । बरु तिहारमा बेहुली झैं रातो-पिरो हुन्छ । यसैले भुक्तभोगी दाइहरूले दसैंमा गाउँ जान नपाएर काठमाडौंमै कुथुर्किनुपर्दा भनेको सुनेको छु, "यहाँ दसैंमा साह्रै नरमाइलो, तिहारमा बरु ठीक !"
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, September 30, 20113: Comments
Labels: अनुभूति, पर्व-संस्कृति
पाटन दरबार स्क्वायर परिसरमा आयोजित तीनदिने साहित्यिक जात्राको तेस्रो तथा अन्तिम दिन झमझम झरी परेको थियो । जात्रामै भाग लिन निकै समयपछि पाटन पसिएको थियो । जात्रा चलुन्जेल तीनै दिन आसपासका पुरातन सम्पदाले लोभ्याइरह्‌यो । मन्दिरका रात्ता भित्ता र भुइँ पनि राताम्मे ।
कृष्ण मन्दिरको सेरोफेरोमा केही फोटो पनि खिचियो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, September 21, 20112: Comments
अनौठो परिस्थिति, कुँवर र इंतजाम
सन् २००५ को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कारबाट सम्मानित भारतका कवि कुँवर नारायण (जन्म १९२७ सेप्टेम्बर १९) इतिहास र मिथकमार्फत वर्तमानलाई हेर्ने विशिष्ट सर्जक मानिन्छन् । भारतमा ज्ञानपीठ पुरस्कारलाई सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारको रूपमा लिइन्छ । मुख्य विधा कविता भए पनि लेख, कथा, समीक्षा पनि लेखेका छन् कुँवरले । उनका कविताहरू इन्टरनेटमै खोजेर पढेको हुँ । त्यसपछि उनको सशक्त कवित्त्वको झलक मिल्दै गयो । वाद, खेमा, उँच-नीचको हिसाब नगरी उनका रचनाहरू मन पराउन सकिन्छ, त्यो चुम्बकीय शक्ति छ तिनमा । सरल भाषाका कारण उनको रचनाले पाठकलाई सजिलै साथी बनाउँछन् । अहिले सर्वत्र विचित्र परिस्थिति छ, जे हो भनेर मान्यो, त्यो हुँदैन । सबै कुरा विडम्बनापूर्ण, मुखुण्डोमय ! यस्तै सन्दर्भ गाँसेर कुँवरले लेखेको ‘इंतजाम’ कविता उनको ८४औं जन्मोत्सवको अवसर छोप्दै बाँड्न चाहेँ ।
कल फिर एक हत्या हुई
अजीब परिस्थितियों में ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, September 16, 20113: Comments
‘साझा’लाई बचाऔं !!
अपडेट : प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अनसनस्थल शान्तिवाटिका पुगेर मागहरू पूरा गर्ने आश्वासन दिएपछि लेखक नयनराज पाण्डेले तेस्रो दिन (सेप्टेम्बर १४ मा) आमरण अनशन तोडेका छन् ।
नाम साझा तर खटनपटन र रजाइँ केही व्यक्तिको भएपछि कति विडम्बनापूर्ण कुरो होला ! त्यस्तो खटनपटन संस्थाको हितको लागि भइदिएको भए त प्रश्‍न गर्ने ठाउँ पनि हुन्थेन । तर साहित्यको प्रवर्द्धन गर्ने र सधैं रुग्ण अवस्थामा रहेको भनिने संस्थामा जब ३२ लाख रूपैयाँ पर्ने गाडी ल्याइन्छ, जसको अध्यक्ष र महाप्रबन्धक दिनको तीनचोटि पहिरन फेरेर अफिसमा झुल्किन्छिन्, त्यो संस्थाको हालत के होला ? जानकारहरूको बुझाइमा साझा प्रकाशन यस्तै अवस्थामा छ अहिले ।
कलेज स्तरको पाठ्यक्रममा रहेका पुस्तक र साहित्यिक कृतिको मनग्गे बिक्री गर्दै आए पनि नाफा भएको कहिल्यै सुनिंदैन । वितरण सन्जाल मुलुकमै सबैभन्दा बढी भएको संस्थाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रद्वारा उत्पादित विद्यालय स्तरका पाठ्यपुस्तक पनि देशभरि बिक्री-वितरण गर्दै आएको छ । साझा प्रकाशनको संस्थागत सुधारको लागि दबाब दिंदै साहित्यकार नयनराज पाण्डेले आमरण अनसन सुरु गरेका छन् । रत्‍नपार्क शान्तिवाटिकामा अनशन थाल्दा प्राय सबैजसो साहित्यकारको साथ र ऐक्यबद्धता पाए उनले । साझाका पूर्व अध्यक्ष, महाप्रबन्धकहरू र पूर्व बोर्ड सदस्यको प्रत्यक्ष सहभागिता रह्यो । कारण, उनका मागहरू जायज छन् । साझा सञ्चालक समितिका सदस्य रहेका पाण्डेले संस्थामा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको सुधारको माग गर्दै आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन् ।
साहित्यकारहरु र (साझा प्रकाशनका) अंशियारहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै नयनराजले प्रमुख रूपमा तीनवटा माग राखेका छन् :
Posted by Jotare Dhaiba at Monday, September 12, 2011 1 : Comments
तिमीले लगाइदिएको बुर्का
मेरो अनुहार जति पनि कालो छैन महाशय !
यति मानहानि पनि नगर
बुर्का लगाए पनि
बुर्का नलगाए पनि
म त उही परिचयमा हाँसिरहेछु खिस्स -
कालो जंगलमा एक धर्सो हिमताल ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, September 09, 20110: Comments
गजल : जवानीका घोडा
बा-आमाका चिसा गोडा अलपत्र छाडेर
कुद्‌यौं जवानीका घोडा अलपत्र छाडेर ।
कहाँ के खजाना बटुल्न हतारिए झैं,
हिँड्नुपर्छ आफ्ना जोडा अलपत्र छाडेर ।
कुन साँगुरो आँगनमा निस्सासिन जान्छौ,
घरको यो बाटो चौडा अलपत्र छाडेर ।
प्यास त तिमीभित्र थियो, बाहिर खोज्दैछौ,
गग्रेटोका माटो र रोडा अलपत्र छाडेर ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, September 08, 20114: Comments
जन्मदिन, जन्मदाता र जोखाना
भदौ २१, बिहानै जन्मदाताको फोन आयो गाउँबाट ।
सोधनी भयो :
– “नुहाइस् ?”
– “उहुँ !”, भर्खरै त छाडेको थिएँ ओछ्‌यान । अघिल्लो दिनको घुमफिर र साथीभाइसँग भेटघाटको थकान थियो । अंग्रेजी क्यालेन्डरअनुसार भने अघिल्लै दिन सेप्टेम्बर ६ मा जन्मदिन परेको थियो ।
– “पूजा-आजा गरिस् त ? म त तेरो लागि मन्दिर गएर आइसकेको, लड्डु पनि चढाएँ ….”
आमाको बोली अझै थामिंदैन – “पशुपतिनाथले रक्षा गरून् भन्दा सधैं झर्को मान्छस्, हेर तिनै हुन् सच्चा र दिगो बाबु-आमा, हामी त नक्कली, आज छौं- भोलि छैनौं ।”
मलाई दिक्क लाग्छ ।
आमा पछिल्ला केही समययता बढी नै निराशापूर्ण कुरा गर्न थाल्नुभएको छ । एकदम निरस पनि । मूर्तिपूजामा मन एकोहोरिएको कट्टर धार्मिक । आफ्नो लागि कुनै रहर र खुसी साँच्नु केही छैन । झोंक चल्छ मलाई, त्यति फोन गर्न पनि मन लाग्दैन । फोन गर्‍यो कि कुनै बेला बोल्दाबोल्दै सुकसुकाउनुहुन्छ अनि मनै अमिलो हुन्छ । फेरि-फेरि फोन गरेर त्यो पिरो बोली सुन्ने साहस कसरी हुनु ?
– “दाजु-भाइ मिलेर बस, तेरो थाई जागिर होस्, त्यति भए मलाई सन्तोक हुन्छ”, भक्कानो उर्ले जस्तो आमाको गला थर्थराएको प्रस्टै सुन्छु ।
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, September 07, 20119: Comments
नेपालथोक एक्सप्रेस : बन्द, बाइक र माछा
ताम्सालिङ नेपाल राष्ट्रिय दल नामको पार्टीले उपत्यका र आसपासको जिल्लामा बन्द आह्‌वान गरेको दिन । गफैगफमा घुमघामको कार्यक्रम बन्यो । “जाने हो त ?” भन्ने एकजनाको सवालमा ल जाम् त जाम् भनेर सहमति जनाइयो । नसोचेको कुरा अकस्मात् हुँदा लेखेकै यस्तो रहेछ भनेर भावीको लेखाप्रति विश्वास जाग्दो रै’छ क्यारे हामीमा ! उपत्यका नजिकै कतै गएर साँझसम्ममा फर्किन भ्याइने ठाउँको सूची केलाउँदा काभ्रेको नेपालथोक रोजाइमा पर्‍यो । त्यसो त ककनी, लाकुरीभञ्ज्याङ पनि रोलक्रममा आएका थिए । जाँदा र फर्किँदा २-२ घन्टा लाग्ने हिसाब गरेर हिंडियो नेपालभित्र नेपालको ट्याग लागेको नेपालथोक । बिहानको साढे १० बजे भक्तपुरतिर नजर मोडियो । रुपेश श्रेष्ठ र कमल कुमारको बाइकले धुँवा निकै फ्याँक्ने भयो आज । कमलजी एकल सवारीमा, म रुपेशजीको पछाडि बसें ।
नियमित बन्दले वाक्कदिक्क भएर होला, मान्छेहरू थेत्तरो भएछन् काठमाडौंका । बिहान सबेरै गाडीको चाप कम भए पनि घाम क्षितिजको कुम-कुम आइपुग्दा बन्दको छनक नमिल्नेगरी सडक भरिभराउ छन् । यस्तो सडकको धुवाँमय नेवा प्रदेश छाडेर ताम्सालिङ प्रदेशतिर लम्किँदा माझिएको प्रकृति र खुलेको आकाशले नशालु बनायो । यस्तै नशामा लट्ठिएर कुनै बेला सास फेर्नै बिर्सिएको हो कि भने जस्तो, अनि कुनै बेला भने यति स्वच्छ वायुबाट धेरै लाभान्वित बनूँ भनेर छिटोछिटो सास फेर्ने उपक्रम चलिरह्‌यो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, September 03, 2011 14 : Comments
कम्ता हिंड्नु छैन यो बाटो …
यो घुँडाको टायर
थारुवानको बयलगाडा अँटाउँदैन
लिम्बूवानको टमटम त झन्
उत्तानो टाङ पर्न खोज्छ
टिक्दैन मेरै पैंतालामुनि यो मूल सडक
पचास माना घ्यूमा
तातो डाडु डामे जस्तो हुन्छ
चप्पलको वाहन छ सुरेली खेल्न
पचासौं कोस बुर्कुशी मार्न तयार छु
हिँड् चप्पलबिनै भने पनि
फुटेको पैंतालाभरिको एक पत्र
चप्पल बराबर छ
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, September 01, 2011 8 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, August 31, 20114: Comments
आज मेरो माया
छातीको आरनभित्र नअटाएर
खोइ कहाँ पो फाल हानेर गयो
पाइन चढाउनु थियो यसमा तिम्रो मायाको
घोट्नु थियो चकमक जस्तै
आफ्नो एक थान सादा कलेजी
देशको सपना र सुस्केरादेखि बेखबर
बेपत्ता नागरिक झैं,
नदेखिने ईश्वर र गुपचुप तस्कर झैं
यस्तो ऐजन ऐजन भएछ आज माया
तिम्रो आँखामा डुब्यो भनूँ त
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, August 26, 2011 8 : Comments
ठाडो उकालो अढाइ घन्टा पैदल छिचोलेर गुम्बामा पुगिसकेपछि हामीलाई फर्किन हतार भइसकेको थियो । दिन ढल्दै गएर पश्चिम क्षितिजलाई सिरानी हाल्ने तर्खरमा थियो । त्यसमाथि गेटमा रहेका सैनिक र प्रहरीहरूले साँझ पाँच बजेसम्ममा तल झरिसक्न उर्दी जारी गरेका थिए ।
शिवपुरी-नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत नागार्जुन सेक्टरको फूलबारी गेटबाट हामी जामाचो गुम्बा ताकेर उक्लिँदैछौं । पहिले कहिल्यै नआएको ठाउँ, बाटो के-कस्तो र कति कठिन भन्ने केही थाहा छैन । घुमघामको गन्तव्य बनाएको गुम्बा पनि कति महत्त्वपूर्ण र मनमोहक भन्ने समेत जानकारी छैन । घुम्नु छ, यत्तिकै हिँडिदिएका छौं । यात्राको रमाइलो भन्नु पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ, आँखा चिम्लिएर आफूलाई बगाइदेऊ – ओम् स्वाहा !!
बालाजुबाट ओशो तपोवन र ककनीतिर जाने बाटोमा छ फूलबारी गेट, बालाजुदेखि नजिकै । नागार्जुन जंगलभित्र छिर्नुअघि गेटमा पहरा दिइरहेका सैनिक र प्रहरीसँग एकछिन भलाकुसारी गरियो । सुनसान जंगल भएकोले सुरक्षाको हिसाबले चाँडै आइपुग्नू भनेर समय तोकेका रहेछन् उनीहरूले । तर उनीहरूकै नियन्त्रणमा रहेको जंगलमा खतरा कुन कुराको ? त्यसमाथि त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीको अनुमति नलिईकन जोसुकै छिर्न नपाउने त्यस क्षेत्रमा कसको डर ? उन्मुक्त छाती फैलाएर हिँडेका हामी फिरन्तेलाई यस्तो कुनैपनि सीमा र बन्धन मन पर्दैन, चाहे त्यो हाम्रै भलाइको लागि निर्धारण गरिएको होस् । साँझ पाँच बजे जसरी पनि तल झरिसक्नु भन्ने उर्दीले हामीलाई पनि चिडचिडाहट पैदा गर्‍यो । तर केही कारण भएर त भनेका होलान् भनेर फटाफट पुगौं, फटाफट फर्कौं भनेर प्रतिजन १० रुपैयाँको टिकट काटेर उकालो खुड्किलो गन्न थालियो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, August 25, 20114: Comments
- “आजकाल किन चुपचाप हुनुहुन्छ ?
चाड मनाउनु भयो त ?”
एक समय थियो, उनको लेखिका मुहारसँग भर्खर सीधासीधी परिचय बन्न पुगेको थियो मेरो । र, त्यो पनि कुनै मध्यस्थकर्ताको सहाराले । उनको औपन्यासिक कृति बजारमा छाएर चलेको गर्मागर्मी देखेर निक्कै अन्तरालमा म कायल बनेथेँ । तर कस्तो भने, पुस्तक-कृतिभन्दा अघि नै उनको मुहार-कृति सामुन्नेमा आइदियो । नतिजा, बल्ल मेरी पाठकीय भोक उनैको कृति खोज्दै बुक सपसामु प्रकट भएथ्यो । त्यसपछि म चुप बस्न सकिनँ, एकै बसाइमा आद्योपान्त उधिनेँ त्यो औपन्यासिक डायरी । अर्थात् उपन्यास कृति- वल्लीको डायरी । पढाइको संयोग खुब जमेथ्यो त्यसबेला । लेखिका र पाठकलाई एक्कैचोटि न्याय भएथ्यो सायद ।
बीचमा उनी अखबारी लेखनमा आक्कलझुक्कल उपस्थित हुन्थिन् र कहिले भने डेरा सरेर लठिभद्र हाल टुङ्ग्याउँदैछु भन्ने खबर दिन्छिन् । कहिले आफैं खबरदाता बनेर कुनै टेलिभिजनमा झुल्किन्छिन् । सबै आँगन कहाँ फाप्छ र मान्छेलाई, कहिले त चौकुना आँगनले लखेटेरै कायल पार्छ र अर्को-अर्को विकल्पको खाता खोल्न परीक्षामा उभ्याउँछ । उनै मनीषा गौचन निकैबेर समयको नेटोमा निलिएर बसिन् र आज मौनता तोड्दै अकस्मात् देखा परी उल्टै सोध्छिन्- 'आजकाल किन चुपचाप हुनुहन्छ ?'
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, August 20, 20112: Comments
मंगल ग्रहमा पानीको संकेत भेटियो
पृथ्वीमा चाहिं के लोप हुने हो फेरि
प्लटिङ गरिसकियो यता सबै जमिन,
चन्द्रमातिर भाग लाउने हो कि घडेरी !
समस्या एउटा-दुइटा होइन
गरिबी, विभेद र बेरोजगारी
एक घर एक सभासद् भए
ढुक्कको सामाजिक रखबारी !
तिमी फलाम भए प्रिय,
म चुम्बक भएर नजोडिने कुरै भएन
अर्को ध्रुवको चुम्बक भेटिए
ज्यान त्यतै नमोडिने कुरै भएन ।
कि संविधान कि छोरी देऊ नभन
सभासद्की छोरी झन् मापाकी होली
संविधानसभाको म्याद सारे जस्तै
भन्ली सुहागरात भोलि ! भोलि !!
गाईजात्राको अवसरमा सबैलाई शुभ कामना ।
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, August 14, 20116: Comments
Labels: पर्व-संस्कृति, व्यङ्ग्यविचार
‘पैसाको काल – अस्पताल !’
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा जतिबेला व्यङ्ग्य स्तम्भ लेख्थेँ, स्वामी रामदेवलाई पत्र भन्ने एउटा लेखमा नेपालका ‘रोगी अस्पताल’का थलिएको चालाबारे झाँको झार्ने प्रयास गरेथेँ । हुनत ती स्तम्भलेखहरूमा मेरो कोठे गफकै भरमार चल्थ्यो, न वस्तुगत अध्ययन, न यथार्थ तथ्याङ्क र न त कुनै स्थलगत अनुसन्धान नै ! समसामयिक राजनीतिक र सामाजिक परिवेशमा जे-जस्तो हुन्डरी चलेको छ, त्यसमै छेडखानी गर्न विषयवस्तु पर्याप्‍त हुन्थ्यो ।
“ चितवनको भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ ‘लीला’ भएछ । अस्पतालको यस्तो लीलामध्ये कतिपयमा बिरामीको इहलीला छिनमै समाप्‍त हुन्छ । भरतपुरमा चाहिं, एक महिलाको घाँटीको अपरेशन गर्नुपर्नेमा पाठेघर निकालेर फालिएछ । चिकित्सा पद्धतिले उपचारको नयाँ शैली त पत्ता लगाएको होइन होला ! पाठेघर निकाल्दा घाँटीको रोग कसरी निको होला !? ”
सेवाभन्दा पैसामुखी हुँदैगएका अस्पताल र त्यहाँका डक्टरहरूको जूका प्रवृत्तिले सर्वसाधारणहरूलाई कसरी डसेको छ र ती निर्धाहरूको मनस्थिति आधुनिक चिकित्‍साशास्त्रबाटै कसरी विकर्षण हुँदैछ भन्ने झलक उतारेको थिएँ त्यो व्यङ्ग्यात्मक पत्रमा । लेखमा कतिपय प्रसङ्गमा काल्पनिकताको प्रचुरता र अतिशयोक्ति पनि भयो होला, तर नेपालको चिकित्सा सेवामा अझै पनि जनसाधारणको सहज पहुँच बन्न सकेको छैन । भव्य अस्पतालको ‘पसल’भित्र एकोहोरो व्यावसायिकताको पखेटा फिँजाउँदैछ चिकित्सा क्षेत्रले । कर्णालीमा चामल लिनका लागि लाइन लागे जस्तै जहाँ पैसाको मुठो लिएर पंक्तिबद्ध भए पनि सही उपचार पाउने ग्यारेन्टी हुन्न ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, August 12, 2011 1 : Comments
Labels: देश-वासी, प्रसङ्गवश
मणि हराएको सर्प जस्तो
किन एकसुर छ मन ?
कसले च्यात्यो सात चिरा इन्द्रेणी,
किन छ यति सादा मौसम ?
निराशा आफैं चकित पर्ने गरी
किन छ यति गलित र थकित ?
जिन्दगीको लमतन्न सडकमा
आमाले कति बालिन् होला दीर्घायुको बाती
यता आफ्नो छाती भने
फुकिरहेछ आयु छटपटीमा ।
मैं हराएको हुँ कि
म जस्तो जवान सपना हराएको हो,
खोजिरहन्छु सहरको बगरमा
धुलोका कणहरूसँगै उडिरहन्छु ।
थाप्नुपर्छ रे जिन्दगीमा बल्छी
जोहो गर्नुपर्छ रे सक्दो धेरै सिकार
हेर्छु पृथ्वीको कुण्डमा -
मैं जस्तो देख्छु हरेक चेहरा
चिन्तन होइन चिन्ताको बल्छीमा
फाल हान्छ एउटा चंगा बिहान
डुब्छ एउटा वृद्ध साँझ ।
(Photo : Kalpana Rai)
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, August 06, 20113: Comments
गत वर्ष जनवरीको जाडो याममा अझ सिरेटो खोज्दै गोरखा जिल्लाको ग्रामीण भेगतिर पुगिएको थियो । व्यस्ततालाई क्रमभङ्ग गरेर यसो बेलामौकामा आफूलाई नचियाए जिउनुको सार के हुन्छ र भन्ने लाग्छ । हामी नेपालीहरूमा पनि पछिल्लो समयमा घुमफिर गर्नुपर्छ भन्ने सोच जाग्दैछ, आफैंलाई ताजगी तुल्याउन र मुलुकको साथै जनजीविका बुझ्न । सिङ्गापुरदेखि थाइल्यान्ड टुरसम्मको योजना बनाउने कति नेपालीहरूलाई नेपालभित्रकै घुम्न लायक ठाउँबारे थाहा छैन । थाहा भए पनि ती ठाउँ तिनलाई उस्तो चिज लाग्दैन । घुम्नु कुनै बेलामा समय र पैसाको बर्बादी मान्थे नेपालीहरू । अझै पनि कतिपयलाई यस्तै लाग्दो हो । तर घुमघामबाट बटुलिने ज्ञान र आनन्द कुनै बन्द कोठामा पुस्तक पढेर, टेलिभिजन र सिनेमा हेरर पाउन सकिंदैन । त्यस्तै सोचले कर्मयोगलाई थाती राखेर उतिबेला तीर्थाटनमा निस्किएका थियौं ५-६ जनाको टोली । त्यही यात्राको सम्झना उतार्दैछु :-
टाढैबाट आँखा तान्ने हिमटाँकुरामुनि थुम्को बस्ती । गोरखा बजार पुग्दा चराहरू गुँड पस्ने साइतमा थिए । साँझपख मान्छेहरू पनि सामसुम्म हुने तर्खरमा लागेका बेला हामी भने बजारदेखि चुचुरोमा रहेको गोरखा दर बार पुग्ने हतारमा होमिएका छौँ । बेसार झैं पहेंलिएको सूर्यास्तबेलाको किरणमा गोरखा निन्याउरो मुख लाएको जोगी जस्तो देखियो ।
बल्ल जुरेको घुमघामको मेसो, त्यसमा पनि गोर्खाली साथीबाटै पाएको निम्तो । यसैले पनि ६ जनाको टोलीमा यात्राभरिको बोझ उनै जिल्लाबासी यदुकिशोरमा पर्ने निश्चित छ । गोरखा जिल्लाकै भित्री गाउँ आरुपोखरीमा रहेकी नवविवाहिता पत्‍नीसँग भेट्ने उनको व्यग्रता आफ्नै ठाउँमा होला, अहिलेलाई पाँच साथीहरूको लर्कोले उसको होश कब्जा गरेको छ । आरुघाट र आरुपोखरी पुग्ने भोक यतिखेर भने गोरखा दरबारको थुम्को चुम्ने ध्याउन्नमा एकत्रित छ । भोककै कुरा गर्दा, काठमाडौँबाट गुड्दै आउँदा पोखरा र गोरखातर्फ फाट्ने तनहुँको आँबुखैरेनीमा खाएको खाजाले थेगेकै छ ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, August 05, 20115: Comments
कसैको कथा नसुनाऊ
उच्चारण नगर भोक शब्दको
बरु उत्सव मनाऊ
यो गरिब देशमा
फेरि अनि फेरि -
सबै अनिकाल बिर्साएर
सबै अभाव मिल्काएर
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, August 02, 20112: Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, July 29, 2011 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Tuesday, July 26, 20113: Comments
पानी काट्दै आउने गोलाबारी झैँ
सहनू है -
कलिलो मुक्का ।
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, July 14, 20115: Comments
गीतमा ‘तिमी फूल जस्ती’ भनेर उपमाको हाँगामा आफ्नी प्रियतमालाई झुलाएको धेरै उदाहरण पाइन्छ । फूलहरू त्यसका लागि सुहाउँदिला पनि लाग्छन् । देख्दा आकर्षक र स्पर्शमा पनि कोमल । देखिनु र हुनुको अन्तर्विरोधयुक्त अर्थात् बहुरपी हुँदैनन् फूलहरू । काँडा र फूल जीवनका दुई पाटा भए पनि फूल नै सबैको रोजाइमा पर्छ । काँडाको तारिफ कतैबाट अझसम्म सुन्न पाएको छैन । भलै मान्छेहरूले भोगाइमा काँडा पनि पचाइराखेका हुन्छन् ।
गत वर्ष फूलका कुरा पोस्टमा फूलका करिब एक दर्जन तस्बिर बाँडेको थिएँ । यसपटक पनि फेरि फूलकै सन्दर्भ लिएर केही तस्बिरसहित आएको छु । यात्रामा हिंड्दा प्रकृतिको वरदान हाम्रो मुलुकमा हरियालीले ढपक्क छोपेको दृश्यले त्यसै शीतल बनाउँछ । त्यही हरियालीमा विविध बुट्यान र फूलले मक्ख बनाउँछ । यात्राको दौरान खिचेका फूलका तस्बिरहरू हेर्न भित्र आउनुस् :-
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, July 09, 20116: Comments
तीन करोड टाउकोको सुमेरु पर्वतमा
मन्तरेर नजाने दशाहरू
सिमानामा कक्रक्क जमेका सीमा पिलर
रात-बिहान केही नभनी बरु सर्छन् यता-उता
फर्सीको मुन्टा जस्तै बटारिन्छन्
ठाउँको ठाउँ पसारो पर्छन्
Posted by Jotare Dhaiba at Wednesday, June 29, 20114: Comments
उर्वरा दिन्छु भनेर
जीवनको मेरो बाँझो सडकमा
नराखिदिनू तिमीले आफ्नो पाइला
खलाँतीसँगै खुइय्य सुस्केरा काढ्दै
आरनमा जो बसिरहेछन् माइला कामी
थकाइ मेटाइदिन्छु भनेर
नफैलाउनू वर्षौं पुरानो श्‍वास
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, June 19, 20114: Comments
टन्टलापुर घामको रापमा पेरिस डाँडा झलमल्ल देखिन्छ । कमरेडहरू आ-आफ्नै सुरमा खरो पोजिसनमा ठाँटिएका छन् । एक कुनामा दुई कमरेडहरूको खासखुस विमर्श जम्दैछ ।
"नरुनूस् कमरेड", हेडक्वार्टर कमरेडले उर्दी जारी गरेको शैलीमा आर्थिक कमरेडलाई अह्राउनुभो । सीताजी र हिसिलाजीबाट छलिएर दुवै कमरेड उखरमाउलो गर्मीमा हावा खान पेरिस डाँडा पुग्नुभएथ्यो ।
"क्वाँऽऽवाँवाँ....." आर्थिक कमरेड झन् डाँको छाडेर कहालिनुभो । ठूलो चोक्टा पाउन हान्निएको तर झोलमा डुबेर भिजेको बिरोलोजस्तै जुम्से भावमा दायाँ-बायाँ लत्रिएको उहाँको मझौला जुँगा त्यो रसिक क्रन्दनले लफक्कै भिजिसकेको थियो ।
"त्यसरी नरुनुस् न भन्या", हेडक्वार्टर कमरेडले बोलीमा अलि लचकता ल्याउँदै जिस्क्याउनुभो, "यस्तो घघडान डक्टर मान्छे यसरी रोएको सुहाएन है !"
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, June 17, 2011 1 : Comments
तिम्रो जीवन यति अँध्यारो छ
कहाँ थाहा थियो र
समाउन दिन हुन्थ्यो
बुद्धु भएरै बसिरहेँ
मेरो यो चुपचापलाई
सम्झिदिनू है तिमीले
Posted by Jotare Dhaiba at Saturday, June 11, 20114: Comments
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेको एक सातापछि बिबीसी नेपाली सेवालाई विशेष अन्तर्वार्ता दिँदै झलनाथ खनालले भनेका थिए, “कतिपय जनता राजनीतिक दलहरुप्रति अलि बढी आक्रोशित पनि छन् । तर जुन मान्छेले मलाई झापड हाने, तिनले मलाई झापड हानेर आज बालुवाटार ल्याइपुर्‍याइदिएका छन् । त्यसो हुनाले मैले त उनलाई धन्यवाद दिएको छु ।”
सात महिनासम्म प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेको रिक्तता मेट्दै आसीन भएका उनलाई तै जे-जस्तो भए’नि मुलुकले प्रधानमन्त्री त पायो भनेर त्यतिबेला धेरैले मन बुझाएका थिए । रिक्त स्थान पुरयेतको अर्थमा । अब चाहिँ गतिलो मान्छे आयो भनेर हिसाब गर्ने ठाउँ त कतै थिएन । जे होस्, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको एकपछि अर्को नौटङ्कीबाट छुटकारा मिलेको थियो ।
शान्ति र संविधानको राष्‍ट्रिय मुद्दालाई सबैले अर्जुनदृष्‍टि बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने उनको महावाणी नै हो । अघि बढ्ने चाहिँ कसले हो, दैव जानून् । राजनीतिक वृत्तमा थेगो बनेको छ - यस्तो गर्नुपर्छ, बनाउनुपर्छ, हुनुपर्छ भन्ने । मानौं कुनै अदृश्य शक्ति वा दूत आएर गरिदिन्छ सबै । अरूलाई खेताला लगाए जस्तो उर्दी र आह्‌वानमा पड्किदिए भयो ।
Posted by Jotare Dhaiba at Friday, June 10, 2011 1 : Comments
Posted by Jotare Dhaiba at Thursday, June 02, 2011 10 : Comments